Lova Iraisam-pirenena any Hongria | Vaovao momba ny dia
Ireo vakoka manerantany ao Hongria
Mariela Carril | | Hongria, Inona no ho hita
Hongria Mety ho firenena kely izy io saingy manana toerana maro izay ny UNESCO mihevitra mendrika ny ho Lova manerantany. Rehefa mandalo ity areti-mandringana ity ary afaka mamerina manamboatra dia indray isika, ahoana ny fitsidihana an'i Hongria?
Ao amin'ny lisitry ny UNESCO dia misy faritra iray mpamboly divay, Abbey taloha, lemaka ahitra ahitra, Budapest, necropolis kristiana iray ary grottoes nalevina teto an-tany izay toa angano.
Andao atomboka ny fitsidihantsika ny renivohitr'i Hongria, ilay mahafatifaty Budapest. Ity tanàna ity dia manana razamben'ny Celtika ary avy eo romana, ka ho azon'ny Hongroàziana tamin'ny taonjato faha-XNUMX Avy eo dia tonga ny Mongol sy ny Ottoman, ny revolisiona, ny Sovietika ... Izay sisa rehetra dia nandahatra.
Raha miresaka ny lisitry ny UNESCO ao Budapest, ny faritra misy ny World Heritage dia miainga avy eo amin'ny Margaret Bridge mankany amin'ny Liberty Bridge. Ity no mitsidika ny Buda Castle, amoron'ny Danube sy ny Andrássy Avenue. Ny telo dia tafiditra ao amin'ny karatra paositry ny morontsiraka Danube.
El Buda Castle o Budai Vár, dia ny tranon'ny mpanjaka manan-tantara. Manana tara fomba gôtika ary naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ambony havoana fa androany dia eo amin'ny faritra antenantenany izay ampahany amin'ny lova sarobidy.
Hatramin'ny trano mimanda tonga any amin'ny funicular ianaoAmin'izao fotoana izao dia naato ny serivisy fa hitohy amin'ny volana ambony. Ny tranobe dia manatanteraka asa ara-kolotsaina ary nandalo fanovana maromaro rehefa mandeha ny fotoana. Na dia misy antsipiriany sasany momba ny medieval ao amin'ny trano mimanda eo an-tongotraoNy marina dia be dia be ny fanamboarana fomba Baroque. Ilaina ny manoritra ny fisian'ny niches medieval taloha tamin'ny alalàn'ny mpamokatra divay nivarotra ny vokatra ary tonga amin'ny andro ankehitriny.
La Fiangonana Matías, mariky ny tanàna, eo afovoan'ny manodidina izy io. Daty avy amin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo ary moske ihany koa izy tamin'ny andron'ny Tiorka. Ankehitriny dia manana fomba neo-Gothic izy io, saingy tamin'ny taonjato faha-XNUMX vao natsangana. Izy io dia manana tilikambo roa misy haavo samy hafa sy taila tile tsara tarehy. Ny tilikambo avo indrindra dia ilay antsoin'izy ireo hoe tilikambo Matías ary afaka miakatra amin'ny tampony amin'ny tohatra miolikolika ianao.
Ao anatin'ny fiangonana dia misy zavakanto kanto sy seramika ary fitaratra miloko maro mahafinaritra. Toerana be fitsidihana any Budapest izy io ka tsy hadinonao io. Ary raha te-hitsangatsangana ianao, satria any an-tendrombohitra dia misy lava-bato sy tionelina ho very mandritra ny fotoana fohy.
Ao amin'ny lisitra ampianay ny morontsiraka Danube. Eto ny torohevitra omeko anao dia ny handehananao manaraka ny moron'ny renirano ary mankany Dune-korzó, ampahany eo anelanelan'ny Bridge Lánchid sy ny Isabel Bridge. Eto no misy ny fahatsiarovana holocaust: Kiraro 60 ho an'ny vehivavy, lehilahy sy ankizy izay mahatadidy ireo niharan'izany, ireo izay nanohitra, ireo maritiora jiosy.
Ary farany, ao Budapest, tsy maintsy manao izany ianao mandehandeha eny amin'ny arabe Andrássy. Ny làlana dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX, taonjato iray nanavao ny tanàn-dehibe manerana an'i Eropa. Aingam-panahy avy any Paris, ny mpamorona azy, Count Gyula Andrássy, no namolavola a arabe kanto sy somary mirehareha, namboarina tamin'ny hazo fisaka tamin'ny zaridaina sy fivarotana tamin'ny voalohany. Ity ny State Opera, ny Departemantan'ny Paris ary ny tranombakoka Hopp Ferenc Oriental.
Mizara telo ny arabe ary eo ambaniny no misy ny metro tranainy indrindra amin'ny kaontinanta eropeana miaraka amin'ny gara tsara tarehy izay tokony ho fantatrao ihany koa. Dia an-tongotra, miantsena sasantsasany, kafe ary mitaingina ny metro ary azonao atao ny manao an-tongotra tsy misy dikany.
Niala tao Budapest izahay dia nankany amin'ny Fambolena divay hongroà, Tokaj. Eto dia mihaona kolontsaina ireo sary miavaka. Tokaj any avaratra atsinanan'ny firenena, dia eo am-pototry ny tandavan-tendrombohitra Zemplén, eo amin'ny fihaonan'ireo reniranon'i Tisza sy Bodrog. Tokaj-Hegyalja00 no anarany feno amin'ny faritry ny divay ary niorina tamin'ny 1737 izany ary 27 no natokana ho an'ny voaloboka. Ny tany volkanika, ny toetrandro, izy rehetra dia manampy amin'ny fanatsarana ny divay.
Divay inona io? Eto a divay mamy tena tsara tarehy ary manokana. Nilaza izy ireo fa niantso azy i Louis XV «divay mpanjaka«. Ny zavatra tsara dia azonao atao mitsidika ny tanimboaloboka, ny famiazam-boalobokaEny, manaova fanandramana na mandoa sakafo hariva mihaja ary makà fahatsiarovana miaraka aminao.
Etsy ankilany, misy ny nekropolis kristiana taloha an'ny Pécs, Sopianae taloha. Izy io dia manana fiaviana romana sy daty nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Renivohi-paritany manan-danja tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary ny neropropolis dia tamin'ny andron'ny Romanina sy ny Kristiana tany am-boalohany. Misy fasana, trano fiangonana ary crypt marobe. Raha tianao ny zavakanto sy ny maritrano dia toerana mahaliana izy io satria io no fasana eropeana izay itehirizana ireo tranobe mahaliana misy rindrina misy haingon-trano tany am-boalohany.
Ny iray amin'ireo toerana lovan'ny vakoka manerantany an'i Hongria dia ny Pannohalma Abbey, Hongria Avaratra, any amin'ny faritra Pannon. Abbey taloha manana ny lanjany ara-kolontsaina lehibe. Ny moanina Benedictine dia niorina tamin'ny taona 996 ho fanomezam-boninahitra an'i San Martín. Izy io dia manana zaridaina tsara tarehy, zaridaina, tanimboaloboka, fisotroana divay, efitrano fisakafoana ary trano fisakafoanana ary trano fandraisam-bahiny. Mbola manan-kery ny vondrom-piarahamonina monasita.
Farany, ny Lava-bato Aggtelek fiaviana karst. Ny faritra dia manankarena tokoa amin'ny fomba fijery paleontolojika, jeolojika ary biolojika ary niely teo anelanelan'i Hongria sy Slovenia. ny Trekking Izany no filaharan'ny andro ary ny fiakarana mafy indrindra dia mety maharitra fito ora. Fa ny momba ny lava-bato, ny Zohy Baradla roa tapitrisa mahery izy io ary 26 kilometatra ny halavany. Goavana izy io, feno stalagmites, ny be mpitia indrindra dia ny Fitenin'ny rafozam-baviny, ny Hall of the Giants, ny Hall of Columns na ny Dragon Head, na dia tsy izy irery aza, dia misy lava-bato 1200 eo ho eo.
Holloko dia tanàna taloha, any avaratry ny firenena. Tsara medieval ambanivohitra, misy rindrina fotsy, lavarangana, nalamina tamina fiaramanidina iray izay mitondra mankany amin'ny fiangonan'ny tilikambo hazo. Misy trano 67 izay lova, mbola onenana, na navadika ho tranombakoka na atrikasa asa-tanana izay mandray mpizahatany. Izy io dia toerana folkloric, miaraka amin'ny fiteniny, ny sakafony ary ny fitafiany manokana.
Ary ara-dalàna, ny Faritra Hortobagy, tany misy ahitra midadasika. Miandry am-pitoniana ny omby eto, misy mpitaingin-tsoavaly, ondry, trano fandraisam-bahiny nentim-paharazana handry mandritra ny alina ary hihinana sy hankafy ny fahitana tsy hita refesina an'ny Meadows lehibe indrindra any Eropa. Raha mandeha amin'ny fararano ianao dia tsara kokoa ny tsy manadino ny fifindra-monina ny crane, ny andian'ondry sy ny andiam-biby miampita ny lanitra.
Ireo no ilay Lova manerantany Hongrie. Kanto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Hongria » Ireo vakoka manerantany ao Hongria
Inona no hitsidika an'i Sardinia
Fitsangatsanganana miaraka amin'ny ankizy any Eropa